Bayern Munich miyey diyaar u tahay inay dib ugu laabato bisha Janaayo xiddiga kooxda Man City ee Leroy Sane? – Gool FM
Haaruun September 5, 2019
(Munich) 05 Sebt 2019. Kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee dalka Jarmalka ayaa la soo warinayaa inay diyaar u tahay inay dalab kale ka gudbiso xiddiga garabka uga ciyaara naadiga Manchester City ee Leroy Sane bilowga sanadka 2020.
Kaddib markii si joogto ah loola xiriirinayay xiddiga qaranka Jarmalka intii lagu jiray suuqii xagaaga wareejinta ayaa si dib u dhacday kaddib markii Sane uu dhaawac halis ah jilibka ka soo gaaray bilowgii bishii Agoosto.
Si kastaba ha ahaatee, 23-sano jirkaan ayaan la filaynin inuu garoomada ku soo laabto illaa iyo dhammaadka xilli ciyaareedkan, waxayna u muuqataa inay Bayern wali ku kalsoon tahay saxiixiisa.
Sida uu warinayo Wargeyska The Sun kooxda haysata horyaalka Bundesliga ayaa dalabkeedii ugu dambeeyey ka gubdin doonta laacibkan suuqa kala iibsiga bisha Janaayo iyagoo sii wadi doona raadintooda laacibka waqtiga dheer ee bedel u noqonaya booska ay banneeyeen Franck Ribery iyo Arjen Robben.
Warbixintu waxa ay intaa ku daraysaa in Man City ay wali u muuqato inay ku heli karto illaa 135 milyan gini laacibkan, inkastoo Sane uu ka yar yahay labo sano qandaraaskiisa haatan kaga dhiman garoonka Etihad.
“Haddii aan mas'uul ahaan lahaa, lama soo saxiixan laheyn Neymar”